श्रीमानले खर्च पुर्‍याउन नसकेको भन्दै यी महिलाले गरिन् विवाह गरेको एक हप्तामै डिवोर्स
जापानकी एक मोडल कातो सारीले विवाह गरेको एक हप्तामा नै श्रीमान‍्सँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी छिन् । श्रीमानले कम खर्च गर्न भनेपछि आफूले रिसाएर सम्बन्ध विच्छेद गरेको उनले बताइन् ।२९ वर्षे कातो सार – केहि दिन अघि रिलिज भएको युट्युब भिडियोमा कातो सारीले छुट्टिएको ६ महिनापछि सम्बन्धविच्छेद टुङ्गो लगाएको जानकारी दिइन् । ती मोडलले श्रीमानले खर्च कम गर्न भनेपछि विवाहको पहिलो हप्तामा नै सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिएको जानकारी दिइन् ।
‘उनीसँग विवाह भएको के अर्थ भयो र ? श्रीमतीको खर्च गर्ने बानी थेग्न नसक्ने गरिब व्यक्तिमाथि मेरो कुनै रुची छैन,’ उनले भिडियोमा भनिन् । कातो सारीले पैसाका लागि विवाह गरेको प्रशंसकसामू स्विकारिन् । उनले आफ्नो श्रीमानको पैसाले महँगा कार, गहना र लुगाफाटो किन्न सक्दिनन् भने उनीसँग विवाहको के औचित्य रह्यो भन्ने प्रश्न गरेकी छिन् । उनका अनुसार महिलाले गर्भावस्था, बच्चा जन्माउने, हुर्काउनेलगायतका जैविक प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ जबकी पुरुषले आफ्नो परिवार र बालबच्चाका लागि पर्याप्त पैसा जुटाउनुपर्छ ।
ती मोडलको यस्तो खुलासा र विवाहप्रतिको उनको धारणा कतिजनालाई फिटिक्कै चित्त बुझेको छैन जसलाई उनीहरुले कमेन्टमार्फत् पोखेका छन् । ‘यहाँ खराब आचरण भएका थुप्रै महिला छन् तर उनी त अर्कै स्तरकी रहिछिन्,’ एक व्यक्तिले युट्युबमा कमेन्ट गरेका छन् । ‘यी महिला देखेर साह्रै दया लाग्यो । अहिलेसम्म उनले राम्रो जीवन बाँचेकी छैनन् जस्तो लाग्यो । यी महिलाको के नै राम्रो छ ? अनुहार हेर्दा मर्नै लागेको जस्ती छिन् ।